Fomba mipoaka any Metro Istanbul | RayHaber | raillynews
HomeTORKIAFaritra Marmara34 IstanbulFomba mipoaka any Metro Istanbul
25 / 03 / 2020 34 Istanbul, Railway, ANKAPOBENY, KENTİÇİ Rail Systems, Headline, Faritra Marmara, Metro, TORKIA, tram
fepetra areti-mifindra ao metro istanbul
Ao anatin'ny faritry ny ady amin'ny valanaretina coronavirus, izay lasa olana manerantany, ny andrimpanjakana rehetra sy ny olona tsirairay ao amin'ny fiaraha-monina dia manana adidy lehibe. ny faritra iray andro mihoatra ny 2 tapitrisa mpandeha-nitondra Tiorkia ny tanàna lehibe indrindra lalamby mpandraharaha amin'ny Metro Istanbul na ho an'ny mpandeha mba hiarovana ny fahasalaman'ny na ny miasa toby sy ny mpandeha sy ny mpiasa ny fifandraisana, na ny tobin'ny sy ny birao, refectory izay mampiasa afa-tsy ny mpiasa ny oniversite, ny atrikasa dia nitandrina mba hanomezana tontolo sahaza ny fepetra manohitra ny otrikaretina na aiza na aiza ao amin'ny trano fanatobiana entana.
Covid-19 - Inona ny New Coronavirus?
Io no anarana nomena ilay karazan'aretina izay nahatonga ilay valanaretina nambara tamin'izao tontolo izao vokatry ny tanànan'i Wuhan any Sina nanomboka tamin'ny fiandohan'ny Janoary 2020. Raha ny virus corona dia virus fantatra amin'ny manampahefana azy nefa tsy miteraka aretina amin'ny olombelona fa niparitaka avy tamin'ny biby mankany amin'ny olona ary avy eo tamin'ny olombelona tamin'ny alàlan'ny mutation. Ny varotra ankehitriny dia lasa areti-mifindra manerantany amin'ny fotoana fohy noho ny antony toa ny maha-aina sy ny fihanaky ny fitsangatsanganana manokana. Farany, nambaran'ny World Health Organisation (OMS) ho toy ny izao tontolo izao ny valin'ny aretina mikraoba - fiparitaka maneran-tany.
Ny fepetra naroson'ny Metro Istanbul vokatry ny fepetra, fandinihana sy tranga noraisina manerana izao tontolo izao;
Ny asantsika alohan'ny fandrahonan'ny Epidemaso
Tahaka ny Metro Istanbul, rehefa tsy hita akory ny valan'aretina tany amin'ny firenentsika, dia niara-niasa tamin'ny monisipaly Istanbul Metropolitan izahay.
Ireo mpandraharaha nasionaly sy iraisam-pirenena, ny manampahefana fitaterana ary ny fandaminana dia narahina ary natsangana ny fifandraisana, ary natao ny fizahana sy fandinihana natao manerana an'izao tontolo izao. Ny fizahana sy ny fanombanana dia notontosain'ny Birao momba ny fahasalamana any Metro Istanbul sy ny fanambarana nataon'ny Ministeran'ny Fahasalamana, ny Birao Siansa ary ny andrim-panjakana mifandraika amin'izany, ary ny fepetra tokony horaisina raha nisy ny fipoahana nipoaka tamin'ny firenentsika, ny fanavaozana drafitra dia nohavaozina ary natombony ny fandinihana ireo dingana natao tamin'ny andiany voalohany. Drafitra vonona asa TÜRSİD (Torkia Rail System mpandraharaha Association) dia ireo koa izay tao.
Ny fitandremantsika amin'ny fanoherana ny fipoahana
Isan'andro mihoatra ny 2 tapitrisa mpandeha-Tiorkia lehibe indrindra nitondra mpandraharaha ny rafitra an-drenivohitra lalamby, ny mpandeha sy ny mpiasa mba hiarovana ny fahasalamana, mba handray anjara amin'ny fisorohana ny fihanaky ny nipoahan'ny izahay fepetra manaraka ireto ho amin'ny fiainana.
Fiomanana natao ho an'ireo mpandeha:
1. Ny karazana fitaovana sy lalantsara izay ifandraisan'ny mpandeha sy mpiasanay, anisan'izany ny faritra anatiny amin'ny fiara sy ny turnstile, ny masin-tapakila, ny mpanondrana, ny escalator, ny escalator, ny tohatra fanamboarana tohatra sy ny sezera dia nopotehina tamin'ny fitaovana famonoana otrikaretina mahomby nandritra ny 30 andro. Ny disinfectant ampiasaina dia nampiharina tamin'ny fomba fogodraody ary ahitana fanafody antiallergenic sy antimicrobial izay tsy manimba ny fahasalaman'ny olombelona.
2. Drafitrasa hetsika ataon'ny orinasam-pitaterana an-trano sy iraisam-pirenena sy
Ny fangatahana Covid-19 dia nodinihina ary ny tombana nataontsika ankehitriny.
3. Mba hampihenana ny tsindry ara-tsaina amin'ireo mpandeha eto amintsika sy ny fampahafantarana azy ireo tsara, dia vonona ny fampahalalana sy sary mifandraika amin'ny disinpikanina sy ny fanadiovana. Ireo asa ireo dia nizara tamin'ny fakantsary nomerika sy kaonty media sosialy amin'ny fiara sy ny tobinay.
4. Nanomboka natolotra ho an'ny mpandeha izay mikorontana nandritra ny dia, ireo mason-koditra, mila mandeha any amin'ny tobim-pahasalamana na mangataka fanampiana ara-pahasalamana.
5. Na dia eo aza ny fihenan'ny isan'ny mpandeha, dia nanapa-kevitra ny hanohy ny sidina amin'ny fomba tsy hamoahana ireo lasibatr'ireo mpandeha araka ny fanapahan-kevitry ny IMM.
6. Mandra-pahatongan'ny fanapaha-kevitra faharoa, naato ny sidina Night Metro.
7. Ampiasaina indrindra ho an'ny fitsangatsanganana sy nomerao mpandeha
Ireo tsipika tefelerik TF90 Maçka-Taşkışla sy TF1 Eyüp-Piyer Loti tefelerik, izay nihena 2%, dia nakatona tsy ho ela.
8. Ny fanapahan-kevitra momba ny fampiasana maimaim-poana ny fiara fitateram-bahoaka ataon'ireo matihanina amin'ny fahasalamana.
9. Mba hampitandremana ireo mpandeha hoe "Arovy ny elanelan-tany misy anao" amin'ny fiara fitaterana lalamby, dia alefa ireo fiara ireo mifikitra amin'ny fampitandremana hipetraka.
Fiarovana no raisina ho an'ny mpiasa:
1. Nomena fiofanana akaiky ny mpandeha ny mpiasa mety hampidi-doza ny fanadiovana, ary nitombo ny fahadiovan'ny fanadiovana eo amin'ny faritra iasan'izy ireo.
2. Ao amin'ireo lalamby fiaran-dalamby misy anay, ny habaka mifandray amin'ireo mpamily fiaran-dalamby misy dia tsy voapoizina / mihosotra.
3. Ny fepetra dia noraisina hiantohana ny fahadiovana sy ny fiarovana ny SMAMP (Mpitondra Fiara miantso vonjy maika eny amin'ny Metro) miasa amin'ny fiara M5 Üsküdar-Çekmeköy tsy misy mpamily metro.
4. Fanambarana sy fanapahan-kevitra noraisin'ny IMM sy ny ministeran'ny fahasalamana no narahina avy hatrany, ary ny fampahalalana sy ny fomba dia zaraina amin'ny mpiasantsika.
5. Ny famonoana otrik'aretina dia isaky ny fotoana nifandraisana, anisan'izany ny tobintsika, ny atrikasa, ny faritra iraisana, ny làlana sy ny fiaran-dalamby ary ny fitaovana fiasana ary ny fitomboan'ny fandroana matetika.
6. Tao amin'ny fidirana ho any amin'ny faritry ny campus, nanomboka ny fandrefesana afo niaraka tamin'ny fitaovana tsy nifandray.
7. Ny fialan-tsasatra amin'ny fametrahana dia ampiharina mifanaraka amin'ny didin'ny filoham-pirenena ho an'ny mpiasanay izay manana olana ara-pahasalamana, fahasembanana, vehivavy bevohoka ary mihoatra ny 60 taona.
8. Ho an'ny mpiasan'ny O aminay, dia nisy ny drafitra natao hanohanana ny fampiharana #evdekal amin'ny alàlan'ny fanomezana antokona olom-bitsy vitsy an'isa mba hivoaka amin'ny rafi-pandaminana Remote Work and Recycling.
9. Ny fomban'ny fahadiovana dia nitombo tamin'ny efitrano fisakafoana sy ny lafaoro dite ary nisy ny fandraisana andraikitra vaovao, mba hisorohana ny fifandraisana amin'ny mpiasa amin'ireny departemanta ireny. Ny fanamboarana fonosana mihidy dia natomboka tamin'ny fizarana sakafo, ary nampiana isan'andro ny fikarakarana ny kafe sy ny mpiasan'ny foibe.
10. Mpiasa mandeha any ivelany dia fantatra sy nofidina teo ambany drafi-piasan'ny Ministeran'ny fahasalamana.
11. Nampandrenesina ny mpiasa sy ny orinasa mba hametrahana fifandraisana amin'ny mpamatsy amin'ny alàlan'ny telefaona sy e-mail, ary hanamaivana ny fidiran'ny mpitsidika sy ny fitsidihan'ny orinasa.
12. Ireo fomba fiasa sy fitsipika momba ny drafitra vonjy maika no niresaka tamin'ny fandaharam-potoana "coronavirus" tao amin'ny Komity OHS. Nohavaozina ny drafitry ny hetsika ary zaraina amin'ny mpiasa rehetra.
13. Ireo fikambanana rehetra mitaky fandraisana anjara mafy toy ny fiofanana an-trano sy ny kaonferansa dia nahemotra.
14. Ny zavatra tokony hatao momba ny fahadiovana manokana dia nanomboka zaraina amin'ny mpiasa sy mpandeha matetika.
Taorian'ireo fanadihadiana rehetra ireo, ny drafi-pifandraisana, fandinihana ireo mpandeha, fanazavana sy fampitandremana nataon'ny IMM sy ny minisiteran'ny fahasalamana dia nohavaozina ary narafitra ny drafitry ny hetsika ho an'ny dingana manaraka.
Mihamaro ny fepetra fiarovana any Metro sy İzban
Fitomboan'ny fepetra fiarovana any amin'ireo metro metro any Azerbaijan
Ny fepetra fiarovana dia nanatsara ny toeram-piantsonan'i Brussels
Fiarovana vaovao vaovao ao amin'ny seranam-piaramanidina Atatürk sy metro
Fomba fanodikodinam-bokatra any amin'ny habaka fananganana IMM Metro
Teknolojia Teknolojia ao Istanbul ny Tech Istanbul
Fiatrehana tromba sy fihenam-bidy
Fepetra fiarovana any amin'ny toeram-pikomiana any Frantsa amin'ny alàlan'ny fe-potoana indray
Fanamarihana Tender: Tao anatin'ny rafitry ny fepetra OHS ho an'ny tafo an'ny orinasa TÜLOMSAŞ Locomotive…
Mihamaro ny fepetra fiarovana any Ankara
Fitsipika azo antoka avy any France mankany amin'ny lalamby
Fitsipika fiarovana fanampiny ho an'ny fiantsonan'ny fiara ao Frantsa (Video)
Fitsipika fiarovana mafonja nalaina tao Marmaray
Ny sidina Metro Metro